Ogaden News Agency (ONA) – Mudaharaado Gilgilay Oromia oo Shalay Dhacay.
Mudaharaado Gilgilay Oromia oo Shalay Dhacay.
Posted by Dulmane	/ November 29, 2017
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Oromia ee gacanta Gumaysiga Abasiiniya kujira ayaa sheegaya mudaharaado aad uwaawayn oo gilgilay intabadan Gobolka ay kacdoonadu kajiraan ee Oromia.
Sida xogta aan kuhelayno mudaharaadayaal aad ucadhaysan ayaa maalin nimadii shalay jiray jidka dheer ee isku xidha magaalooyinka Addis Ababa iyo Harar, sidoo kale mudaharaadayaasha ayaa lasheegayaa in ay jareen jidad muhiim ah oo soogala magaalada Addis Ababa.
Kacdoon wadayaasha ayaa lasheegayaa in ay isugu soo baxeen magaalada Herar iyagoo kudhawaaqayay erayo kadhan ah wayaanaha iyo kuwa lashaqeeya ee kaba qaadka u ah iyo waliba kuwa doonaya in ay shacabka afduubaan.
Sidoo kale mudaharaadayaasha Oromia ayaa lasheegayaa in ay isugu soo baxeen agagaarka Jaamaca Haramayo, waxaana lagu soo waramayaa in ay kacdoon wadayaashu joojiyeen dhamaan howlihii gumaysiga ee aagaas kasocda iyo kuwii dadwaynahaba.
Dhinaca kale kacdoon wadayaal kumanaan ah ayaa lasheegayaa in ayisugu soo maxeen magaalada Borane iyo waliba Jaamaca Juma, iyagoo sagootinayay taliska uu wakhtigiisii dhamaaday ee wayaanaha isla markaana quusinaya kuwa dabaqoodhiga ah.
Dadwaynaha Oromia ee maalintii shalay isu soobaxay ayaa si cad usheegayay in ay dadka soomaalida ah walaalo yihiin isla markaana uu Tigreegu abuurayo colaada qoomiyadaha Oromada iyo Soomaalida.
Iskusoo wada duub oo kacdoonada hada kabilowday Oromia ayaa umuuqda kuwo sagootin ah oo gumaysiga lagu quusinayo isla markaana lagu soo dhawaynayo xoriyada shacabka Oromia.